बिहानको ०३ : ०६
काठमाडौ. । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् । सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गर्न निर्णय गरेको हो । बालुवाटारस्थित प्रधानमन...
गभर्नरको लागि योग्य छु, सरकारको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार्छु
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम गभर्नरका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्येको एक हुन् चिन्तामणि सिवाकोटी। उनी अहिले केन्द्रीय बैंकक...